Smart Speaker Wake Up: mpandahateny fanairana miaraka amin'ny Alexa | Vaovao momba ny gadget
Ny vokatra farany navelan'ny Energy Sistem ho antsika ao amin'ny IFA 2019 dia mety ho ny zava-baovao farany nahagaga indrindra. Ny orinasa dia manolotra ny Smart Speaker Wake Up, izay mpandahateny fanairana, izay miaraka amin'i Alexa tafiditra ho mpanampy. Vokatra izay mijanona ao anatin'ny sokajy audio, na dia amin'ity tranga ity aza misy fampiasana isan-karazany.
Ity modely ity dia natomboka hamita ny fitomboan'ny isan'ny mpandahateny ao amin'ilay orinasa. Ankoatr'izay, Smart Speaker Wake Up no mpandahateny mahay voalohany dia navoaka tamin'ny tsena izay mampiasa radio alarm function ary manana efijery lehibe io. Vokatra izay itadiavan'i Energy Sistem hanaitra ireo mpampiasa azy.
Mifohaza ny mpandahateny mahay dia atolotra hamita ny isan-karazany ny marika. Izy io dia maodely iray izay manana ny zavatra rehetra ilainao hanombohana ny andro amin'ny fomba mahafinaritra sy manokana indrindra azo atao. Ity fitaovana ity dia manana teknolojia multiroom sy safidy hafa amin'ny playback mifanaraka amin'ny Spotify sy Airplay hiaraka amin'ilay mpampiasa amin'ny mozika tiany mandritra ny tontolo andro.
Ho fanampin'ny fampidirana ny mpanampy virtoaly Alexa, dia misy mpandahateny miaraka amin'ny haitao Bluetooth 5.0 sy ny rafitry ny efitrano misy azy marobe mihaino mozika tsy misy tariby isaky ny tianao. Manolotra feo stereo 2.0 sy hery 10 W miaraka amina rafitra fanatsarana ny bas, amin'ny alàlan'ny membrane passive double izay hahatonga ny mpampiasa hankafy feo mazava sy avo lenta. Energy Sistem koa dia manolotra charger tsy misy tariby mifanaraka amin'ny fenitra Qi.
Smart Speaker Wake Up koa dia manana seranan-tsambo famahanana USB iray ary fampidirana audio fanampiny iray ao anaty minijack 3,5mm, hampifandray fitaovana hafa. Ireo safidy rehetra ireo dia azo alamina ihany koa amin'ny maody famantaranandro fanairana. Izy io koa dia mampiditra efijery lehibe hijerena tsara ny fepetra maivana rehetra ary manome ny fahafaha-mifehy ny hamafiny.
Ity mpandahateny fanairana ity dia mamela anao handrindra fanairana hatramin'ny roa tsy miankina. Ohatra, manohana ny iray mandritra ny andro fiasana ary ny iray amin'ny faran'ny herinandro. Ho fanampin'izany, manana fihemorana izy ary mihemotra isaky ny 10 minitra. Tsy misy isalasalana, vokatra mahatalanjona avy amin'ny Energy Sistem.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Sary sy feo » Energy Sistema dia manolotra Smart Speaker Wake Up, mpandahateny fanairana miaraka amin'i Alexa